Ahina hikatso ny asam-panjakana : tratry ny angaredon’ny fanoherana ireo minisitra HVM | NewsMada
Ahina hikatso ny asam-panjakana : tratry ny angaredon’ny fanoherana ireo minisitra HVM
Nitranga ny nampoizina ary mety hikatso hatramin’ny fampandehanana ny asam-panjakana. Iharan’ny fanoherana mahery vaika amin’ny alalan’ny hetsika sy sora-baventy sahady ireo minisitra sasany vao notendrena. Anisan’izany ireo minisitera mbola ahitana minisitra avy amin’ny HVM. Nitranga izany teny amin’ny minisiteran’ny Paositra eny Antaninarenina, omaly. Navandravandran’ny sorabaventy eo amin’ny vavahady ny fitsipahana ny minisitra Maharante Jean de Dieu, vao notendrena. Mbola hifampidinika amin’ny minisitra vaovao ho an’ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien ; kosa ireo sendikàn’ny mpampianatra sasany raha efa nilaza fa tsy hiverina hampianatra raha mbola HVM ny eo amin’io seza io.
Diabe nihazo an’Antaninarenina nataon’ny sendikà
Nanao diabe nihazo teny Antaninarenina ny Randrambaon’ny sendikà naneho ny tsy fahafaliany amin’ny fiverenan’ireo minisitra HVM eo anivon’ny governemanta. Mitohy koa ny hetsiky ny mpiasan’ny minisiteran’ny Vola. Mbola voatana amin’ny toerany ny am-perinasa, Andriambololona Vonintsalama. “Misy maharary anay ao. Tsy ny ladoany irery manana olana amin’ny minisitra fa eo koa ny hetra sy ny trano printy. Tsy hanaiky ny hijanon’ny minisitry ny Vola… Hitohy sy hihamafy ny tolona ka ialana tsiny amin’ireo mampiasa ny mpiasan’ny ladoany sy ny hetra…”, hoy izy ireo.
Hanamafy ny tolona ny fikambanan’ny mpianatra
Nitokona koa ny eo anivon’ny Tafita, ao amin’ny minisiteran’ny Tanora. Nikatona ny varavarana. “Tsy voaloa ny Cnaps. Ilaina ny fanovana fitantanana ary mitsipaka ny gaboraraka sy miady amin’ny kolikoly. Eo koa ny kiantranoantrano. Tsy miady amin’ny olona ary tsy hanongana fa fitakiana ny zo fototra ka hanairana ny mpitantana”, hoy izy ireo. Ampahany ihany ireo fa mbola mety hitombo an-dalana izany satria niantso koa ny mpianatry ny oniversite ireo fikambanan’ny mpianatra isan-tsokajiny hihetsika hanamafy ny tolona eny amin’ny kianjan’ny 13 mey, manomboka anio. Fitsipahana marindrano ny fiverenan’ny minisitry ny Fampianarana ambony ny antony.